उपत्यका बिनासकारीको बिरोध
सर्वोच्चको आदेश र नागरिक आवाज सुन, सभ्यता र संस्कृति बचाउ भन्दै सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि पानीको फोहरा र लाठीचार्ज गरेर सताउने मात्र होइन, केहीलाई पक्राउ गरेर थुन्ने काम समेत भएपछि आक्रोसित नगरवासी र खासगरी नेवार समुदायलाई तिमीहरु आदिवासी नै होइनौं भनेर अभिव्यक्ति दिने उपत्यका विकास प्राधिकराण्का कार्यकारी भाइकाजी तिवारीविरुद्ध नागरिक आक्रोसमात्र निस्किएको छैन, भाइकाजी तिवारीको पुतलासमेत जलाइएको छ ।
गैरन्यायिक सडक विस्तारको विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीहरुले रैथाने स्थानीयलाइ विस्थापित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । यही क्रममा चर्को नारावाजी गर्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीको पुत्ला जलाइएको हो ।
आखिर भाइकाजी तिवारी अन्टसन्ट बोलेर नागरिकलाई भड्काउने काम किन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा लोकको आवाज र लोक अपेक्षा सुन्ने कि नसुन्ने ? न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने विषयमा भाइकाजीजस्ता व्यक्तिहरु किन दमनमा उत्रिएका छन् ? लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, व्यक्तितन्त्र होइन । कानुनी तन्त्र हो भने लोकले खोजेको न्यायको आवाज सरकारले किन सुनिरहेको छैन ?
जबरजस्ती शासन त निरंकूश हुन्छ । के ओली सरकार पनि निरंकूश भएर निस्किएको हो । प्रहरी शासन नै चलाउने हो भने जनमत, जनादेशको कुरा गरेर फुइँकी किन लगाउनु ? विधिको शासनमा प्रतिवद्धता छ भने यस्ता बुढाबुढी, स्थानीयवासीलाई दमन गर्ने र तिनको कुरै नसुनी पानीको फोहरादेखि प्रहरीको उठाएर जनतालाई किन तर्साउने काम भइरहेको छ ? नेपालमा अर्को जनआन्दोलनको जरुरी भएकै हो ?
जनतालाई जिस्क्याउँदा, जनको कुरा नसुन्दा देशमा के के भएनन् ? तिनै जनताको अगुवा हुँ भन्नेले फेरि बुढाबुढी, बालबच्चा सबैलाई पानीको फोहराले इन्तु न चिन्तु पारेर लडाउने, तर्साउने र सातो लिएर शासन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने हो भने यो सोच गलत हो । केपी ओलीजी, तपाईको लोकतान्त्रिक शासन यस्तै हो त ?